MURAN: Qoraa Kubbada Cagta Ah Oo Muran Waali Ah Ku Abuuray Qoraal Uu Ka Sameeyay Waayihii Ciyiaareed Ee Zinedine Zidane- Miyaad Ku Raacsan Tahay Fikradiisa? - GOOL24.NET
MURAN: Qoraa Kubbada Cagta Ah Oo Muran Waali Ah Ku Abuuray Qoraal Uu Ka Sameeyay Waayihii Ciyiaareed Ee Zinedine Zidane- Miyaad Ku Raacsan Tahay Fikradiisa?
Zinedine Zidane ayaa loo tixgaliyaa mid ka mid ah ciyaartoydii abid kubbada cagta soo martay ee ugu fiicnayd gaar ahaan farshaxanka kubbada cagta wuxuuna soo qaatay waayo ciyaareed oo fiican intii uu joogay kooxaha Juventus iyo Real Madrid laakiin qoraa kubbada cagta ah ayaa muran xoogan ka abuuray waayihii ciyaareed ee Zinedine Zidane uu soo qaatay.
Zinedine Zidane ayaa sanadkii 1998 kii ku guulaystay abaal marinta Ballon d’Or wuxuuna saddex jeer noqday xidiga sanadka ugu fiican ee abaal marinta ay FIFA bixiso waxaana si gaar ah loogu xusuustaa guushii uu Real Madrid gaadhsiiyay finalkii Champions league ee 2002 markaas oo uu Bayer Liverkusen ka dhaliyay goolka abid ugu quruxda badan Champions league.
Zinedine Zidane ayaa ahaa xidigii abid ugu qaalisanaa ee ugu horeeyay ee lacag waali ah ay Real Madrid ka bixisay isaga Florentino Perez ka soo bixiyay £45.6 milyan gini wuxuuna ka mid noqday ciyaartoydii Madrid abid loogu jeclaa.
Zidane ayaa xulka qarankiisa France kula soo guulaystay koobka aduunka sanadkii 1998 kii isaga oo waliba ka mid ahaa xidigaha sababta buuxda u ahaa guushii France halka sanadkii 2006 kii uu markale soo gaadhsiiyay finalkii koobka aduunka.
Haddaba qoraaga kubbada cagta ee Michael Cox ayaa qoraal muran badan abuuray soo dhigay bartiisa twitterka wuxuuna sheegay in Zidane uu ugu badnaa soo qaatay laba xili ciyaareed oo kaliya oo uu si joogto ah sida ugu fiican u ciyaaray haddii kalena aanu hal xili ciyaareed oo uu si joogto ah si fiican ugu ciyaaray soo qaadan.
Michael Cox ayaa soo qoray: ” Toban sanadood oo uu joogay Serie A iyo La Liga, tirada xili ciyaareedyada fiican ee uu sida joogtada ah u soo qaatay Zinedine Zidane waxay ugu badnaan ahaayeen 2 ama sida laga yaabo inay tahay 0″.
Jamaahiirta kubbada cagta ayaa doodan ku qaybsamay waxayna qaar badan oo ka mid ahi si xun u dhaliileen fikrada Michael Cox laakiin waxaa jira dad kale oo badan oo si xoogan u taageeray qiimaynta Michael Cox waxayna tilmaameen in Zidane uu sumcada wayn ku helay kulamo gaar ah oo uu wax fiican sameeyay.
Dad kale oo qayb ka ahaa dooda Michael Cox ayaa sheegay in Zidane iyo ciyaartoydii waa waynayd ee hore ayna waqti dheer soo joogtayn jirin qaab ciyaareedkooda waxayna tilmaameen in Ronaldo iyo Messi oo kaliyi noqdeen labada xidig ee waqti dheer soo joogteeyay qaab ciyaareedkooda.
Haddaba akhriste, haddii aad fursad u heshay in aad daawatay waqtigii uu Zinedine Zidane ciyaarayay miyaad Michael Cox ku raacsan tahay in Zidane aanu soo joogtayn qaab ciyaareedkiisa oo uu ugu badnaan laba xil ciyaareed halka ugu fiican ku soo qaatay?